Tesco Free Spirit Ultra Regular Sanitary Towels With Wings 14 Pack | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Tesco Free Spirit Ultra Regular Sanitary Towels With Wings 14 Pack– Ordrs
Towels Free Spirit Ultra Towels nwere nku 14 mkpọ
Anyị akwa akwa nhicha ikpokọta ihe absorbent isi na a adụ owu obi na-adị n'elu mpempe akwụkwọ na-enye kacha nchebe na nkasi obi. Ha nwere udi nkedo nke emeputara nke oma ka aru ghari ya ma nwekwa nku ha nwere ike ichota akwa ahu n’onodu nchebe. Jiri obi ike bie ndụ na Tesco Free Spirit.
Softness & Nkasi obi Dermatologically nwalere
Akwa nhicha ahụ anyị jikọtara isi na-adọrọ adọrọ na mpempe akwụkwọ dị nro iji chebe oke nkasi obi na nkasi obi. Ha nwere udi nkedo nke emeputara nke oma ka aru gi ma nwee nku di iche iche na enyere aka idobe akwa ahu n’onodu nchebe. Jiri obi ike bie ndụ na Tesco Free Spirit. Maka nchebe na nkasi obi kachasị na usoro okirikiri gị, ị kwesịrị ịtụle ngwaahịa ndị dị elu na mbido, na-agagharị na mmiri dị ala ka mmiri gị na-adị ọkụ. Mara ahụ gị! Mgbanwe ị na-agba n’usoro gị, igba obara n’azu oge okirikiri gị, ma ọ bụ mgbe ị kwụsịchara, ihe a nile nwere ike bụrụ ihe izizi nke nsogbu ahụike gynecology. Ọ bụrụ n’ịhu mgbanwe ọ bụla ma ọ bụ nwee mmetụ ọ bụla, gaa leta GP edebanyere aha.